Ahlu Sunna oo ka hadashay xariga Wariye C/laahi Warsame Rooble | Baydhabo Online
Ahlu Sunna oo ka hadashay xariga Wariye C/laahi Warsame Rooble
Mursal Maxamed Yuusuf (Xeefow), Afhayeenka Maamulka Gobolada Dhexe oo xaqiijiyay xariga Wariye C/laahi Warsame Rooble, ayaa dhanka kale sheegay in loo xiray warar xaqiiqda ka fog, oo uu ka diray Gobolada Dhexe.
Wariyaha, ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii waxaa ay Ciidamada Ahlu Sunna ka kaxeysteen Bartamaha Magaalada Dhuusamareeb, xilli uu ku sugnaa.
Afhayeenka Maamulka Gobolada Dhexe, ayaa tilmaamay Wariyaha oo ahaa wakiil wareedka Radio Kulmiye, in warar aan sal iyo raad toona lahayn uu ka soo diray Magaalada Dhuusamareeb, sida in niman hubeysan ay la wareegeen Saldhiga Booliska, sida uu yiri.
Afhayeenka, ayaa sheegay in marar badan Suxufigaasi looga digay in uu ka fiirsado wararka uu ka diraayo Magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada kale, ee ay ka arrimiso Ahlu Sunna, balse uu iska dhego tiray, sida uu yiri.
Mursal Maxamed Yuusuf oo u waramay Dhacdo.com, ayaa tibaaxay in Suxufiga C/laahi Warsame Rooble uu iminka ku xiran yahay Xarunta Nabad Suggida ku leedahay Dhuusamareeb, iyadoona su’aalo la weydiinayo.
Marka laga soo taggo eedeymaha ka soo yeeray Afhayeenka Ahlu Sunna, ayaa waxaan jirin ilo wareedyo madax bannaan oo xaqiijin kara eedeymahaasi.
Maamulka Gobolada Dhexe, ayaa ka mid ah Maamulada Wadanka ka dhisan ee caburinta ku haya bahda Saxaafadda.
Ahlu Sunna, ayaa marar kala duwan xarig kula kacday Suxufiyiinta ka kala hawlgala Magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb.